Fizahantany sy fandraisam-bahiny :: Hiara-hiasa amin’ny any ivelany ny toeram-piofanana eto Madagasikara • AoRaha
Fizahantany sy fandraisam-bahiny Hiara-hiasa amin’ny any ivelany ny toeram-piofanana eto Madagasikara
Hisokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany ireo toeram-piofanana mikasika ny hainahandro, fizahantany ary ny fandraisam-bahiny ho fampiroboroboana ity seha-pihariana ity.
Hiara-hiasa ny Havila School, etsy Mamory Ivato sy ny « Business & hotel Management School (BHMS) avy any Soisa. Afaka hiofana ao amin’ny BMHS any Soisa ireo mpianatra nahavita fianarana roa taona ao amin’ny Havilla School, ho an’izay mahafeno fepetra.
« Na mahay aza isika Malagasy dia mila traikefa avy any ivelany eo amin’ny sehatry ny fandraharahana sy fitantanana. Mila misokatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena isika. Tsy tokony hiandry ny fanjakana foana fa hiezaka hamorona fihariana mifantoka amin’ny fianarana norantovina », hoy Andriantsitohaimanantena Toky na Chef Toky Ramà, mpanorina ny Havilla School.
Hanomboka amin’ny volana novambra ho avy izao dia efa hisy mpianatra hanohy fianarana any Soisa. Hahazo mari-pahaizana iraisam-pirenena ireo mpianatra ireo rehefa vita ny fiofanana mandritra ny valo ambin’ny folo volana. Manome toky ity sekoly isan’ny lehibe indrindra any Eoropa ity fa hanome asa ho an’ireo mpianatra rehetra nahavita fiofanana.